Lọjistik Parts Manufacturers na Suppliers - China lọjistik Parts Factory
Ngalaba nke Lojistiiki
Otu ihu pallet
Pallets nwere ihe abụọ. Nke mbu: Pallets bu okwu ejiri na ulo oru mbu ahia. Ha na-ezo aka na ngwongwo nke ebubata ma bufee site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku ma ọ bụ ụgbọ njem jikọtara n'aka ndị nwe ibu. Ọ bụ ajụjụ nke onye nwe ibu. Onye ọ bụla nwere ibu chọrọ ihe karịrị otu ajụjụ maka ọrụ ọrụ lọjistik ọ bụla. Ọnụahịa dị mma karịa atọ. Ya mere, n'okpuru usoro azụmaahịa ọdịnala, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke pallets. Typedị nke abụọ: Pallets, a ...
Mkpofu ahịhịa bụ akpa maka ịchekwa ahịhịa, nke nwere otu ọrụ dị ka ahịhịa ahịhịa, ma n'ozuzu ya ma ọ bụ akụkụ anọ. Candị ihe mkpofu ụdị mgbasa ozi na-ewu ewu. A na-ejikarị ya eme ihe n’obodo, ogige ntụrụndụ na ebe ọha na eze. Ihe mkpofu ahịhịa ga-etolite n'ime ụdị ọgbara ọhụrụ nke nwere ihe mkpofu ahịhịa nwere ọgụgụ isi. Ihe nzuzo bụ na e nwere ọwara okpuru ala na igwe na-ekpo ọkụ n’okpuru ahịhịa ahịhịa ọ bụla n’ime obodo, dịka igwe nsị mmiri, n’okpuru ọrụ nke igwe ikuku. Aut ...
Aha Aha Nke Ugboro abụọ ： Plelet Deck abụọ dị D4-1111 Nọmba: KH170384 Akụkụ nke: 1100 * 1100 * 140 mm Nkebi nke ： 19.28kg Pallet Part Feature Pallet siri ike maka ịkwado, ike mgbanwe, ike ala dị ala, nkuku dị elu , nkezi ibu ike wdg pallet Dolly Nchikota pallet mkpuchi Ebilata mkpa dị na-eme ka ndị ọzọ na usoro dị ka Mucell. Kaihua Technology pallet ebu imewe na rụpụta Part imewe / CAE analysis / akpụzi eruba analysis Mucell usoro pallet Ibu Be ...
Nnukwu Industrial Crate (5 version)
Big Industrial Crate (5 version) Nkebi nke: 1200 X 1000 X 731mm 1200 X 1000 X 821mm 1200 X 1000 X 547mm akpụzi Size: 2560x2130x1560mm Akụkụ weight 19.28kg Pallet Part Feature Pallet siri ike maka ịkwado, ike mgbanwe, obere efere ike, n'akuku dobe, nkezi ibu ike wdg pallet Dolly Nchikota pallet mkpuchi Weight mbelata mkpa na-eme ka ndị ọzọ na usoro dị ka Mucell. Kaihua Technology pallet ebu imewe na rụpụta Part imewe / CAE analysis / akpụzi eruba analysi ...
Mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn Tote Akụkụ Aha: Mkpụrụ vaịn na-atụgharị ụda Mold size: 1790X1090X1057 mm M akpụzi: 11Ton Nkebi nke: 710X953X26 mm Nkebi nke ibu: 650g Pallet Part Feature Pallet siri ike maka ịkwado, ike mgbanwe, ike efere ala, nkuku nkenke, nkezi ibu ike wdg pallet Dolly Nchikota pallet mkpuchi Idolata mkpa mkpa na-eme ka ndị ọzọ na usoro dị ka Mucell. Kaihua Technology pallet ebu imewe na rụpụta Part imewe / CAE analysis / akpụzi eruba analysis Muce ...
360L Dustbin Nkebi nke: 867 X 751 X 1059 mm Nha ebu: 1795X1695X1865 mm M akpụzi: 44345 n'arọ Ngwaọrụ: HT 3300T Ngwọta na ebu na-eme maka dustbin, pallet, crate wdg Ọtụtụ ndị ebu na-ebupụ ndị ahịa na Europe na ahịa America. . Ugbu a, anyị nwere ike ịnye nnukwu ebu ibu ruo 90T. Anyị nwere ike ịme ihe eji akpụ uzuzu site na 40L ruo 3200L. Site na ahụmịhe bara ụba anyị nwetara kwa afọ, ihe nkedo anyị nwere ike ịnwe oge ngwangwa na ogologo ndụ. Anyị nwere ike inye m ...
240L Dustbin Nkebi nke: 734 * 585 * 1034mm Nha ebu: 1200 * 1350 * 1615mm Ebu ebu: 20830kg Production igwe: 2500T Ngwọta na ebu na-eme maka dustbin, pallet, crate wdg Ọtụtụ ndị ebu na-ebupụ ndị ahịa na Europe na America ahịa. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye nnukwu ebu ibu ruo 90T. Anyị nwere ike ịme ihe eji akpụ uzuzu site na 40L ruo 3200L. Site na ahụmịhe bara ụba anyị nwetara kwa afọ, ihe nkedo anyị nwere ike ịnwe oge ngwangwa na ogologo ndụ. Anyị nwere ike inye ...
120L Dustbin Nkebi nke: 552 * 480 * 899 mm Nha ebu: 1050 * 1100 * 1479mm M akpụzi ibu: 13315kg Production igwe: 2400T Ngwọta na ebu na-eme maka dustbin, pallet, crate wdg Ọtụtụ ndị ebu na-ebupụ ndị ahịa na Europe na America ahịa. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye nnukwu ebu ibu ruo 90T. Anyị nwere ike ịme ihe eji akpụ uzuzu site na 40L ruo 3200L. Site na ahụmịhe bara ụba anyị nwetara kwa afọ, ihe nkedo anyị nwere ike ịnwe oge ngwangwa na ogologo ndụ. Anyị nwere ike inye ...
110L Dustbin Nkebi nke: 552 * 480 * 899 mm Nha ebu: 1050 * 1100 * 1479mm M akpụzi ibu: 13315kg Production igwe: 2400T Ngwọta na ebu na-eme maka dustbin, pallet, crate wdg Ọtụtụ ndị ebu na-ebupụ ndị ahịa na Europe na America ahịa. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye nnukwu ebu ibu ruo 90T. Anyị nwere ike ịme ihe eji akpụ uzuzu site na 40L ruo 3200L. Site na ahụmịhe bara ụba anyị nwetara kwa afọ, ihe nkedo anyị nwere ike ịnwe oge ngwangwa na ogologo ndụ. Anyị nwere ike inye ...
Nzukọ nke abụọ nke 2020 na-ere ...zụ ahịa ...